Accueil > Gazetin'ny nosy > Lehiben’ny tobin-tafika: Tezitra amin’ny Filoha Rajaonarimampianina avokoa ?
Lehiben’ny tobin-tafika: Tezitra amin’ny Filoha Rajaonarimampianina avokoa ?
Tranga iray nanamarika ny faramparan’ny taona teo ny fanondrtotan’ny fitondram-panjakana ho jeneraly ny sasany amin’ireo kolonely eo anivon’ny tafika, ary na ny jeneraly nilanja kintana roa koa aza dia nisy ny nampiana ka lasda kintana telo…
Ny nisongadina aloha dia nivandravandra loatra ny fanaon’ny fitondram-panjakana ambony amin’ny “fijerena tavan’olona” vokatry ny “tsikombakomba maloto” tany ambadika tany, toa izay nitranga rehetra tamin’ny fandraisana mpiasampanjakana ambony na fanendrena minisitra na fandefasana ho mpiasan’ny masoivoho Malagasy any ivelany sy ny sisa tsy ho voatanisa.
Niteraka fimonomononana teo anivon’ny fianakaviamben’ny tafika iny fanondrotana galona farany teo iny satria mifankalala avokoa ange ny samy tafika e! Isaky ny tobin-tafika, tsy azo hadinoina, dia misy an’ireo ambaratongan-galonan’ny tafika ireo, manomboka amin’ny ampombolahy (zazavao) ka hatrany amin’ny manamboninahitra jeneraly. Ny dikan’izany, “sioka tokana” araka ny fomba fiteny dia mifampiampita ny hafatra, ary dia tonga amin’izao endriny ankehitriny toa ibaribarian’ny fivakisan’ny tafika izao. Vokatry ny fanapahan-kevitry ny filohampirenena Rajaonarimampianina izany, na tiana na tsy tiana, satria ny fanondrotana galona ho manamboninahitra jeneraly dia fanapahan-kevitra politika. Na inona na inona tolo-kevitry ny minisitry ny fiarovam-pirenena, na inona na inona fahitan’ny fianakaviamben’ny tafika ny fahamendrehan’ny manamboninahitra ambony iray eo amin’ny laharan’ny kolonely tokony hasondrotra ho manamboninahitra jeneraly, dia ny filohampirenena ihany no tompon-teny farany. Eo no mahatonga anay hanamarika fa sanatriavin’ny vava ve dia hampisara-bazana ny tafika ny filoha Rajaonarimampianina tamin’iny fanondrotana galona ho manamboninahitra jeneraly iny?
Raha ny akom-baovao fantatra mantsy omaly dia nisy fivorian’ireo lehiben’ny vondron-kery isan-karazany eo anivon’ny Tafika sy Zandary ny alarobia teo teny Betsizaraina, ary naharitra ora maromaro ny fivorian’ireo. Ny fanamarihana voalohany tsy azo hadinoina amin’ny fivoriana toa izao dia tsy isan’andro na isam-bolana no mivory tampoka tahaka izao ireo lehibe ireo, hoy ny akom-baovao. Ny fanampim-baovao no nanamarika fa momba ny fanilihana ireo manamboninahitra sasany teo amin’ity resaka fampiakarana galona ho manamboninahitra Jeneraly ity no tena nibahana tao amin’io fivoriana io.
Ny manamboninahitra ambony iray nanontanianay aloha omaly dia nanamarika fa “misy tokoa ny tsy fankasitrahanay tafika an’iny fanapahan-kevitra nanondrotana ho manamboninahitra jeneraly ny namana sasany iny, ary mafana ny ady hevitra eo anivonay samy tafika, saingy tsy hampivaky ny firaisankinanay tafika izany fa vao mainka aza hanamafy bebe kokoa ny maha-tokana anay fa ny olona mitetika ny hampisara-bazana anay no hofaizinay, tahaka ny nanaovanay an-dRavalomanana tamin’ny 2009 satria nanitsakakitsaka ampaladia ny voninahitray tafika Malagasy iny filoha teo aloha iny.”